Kala -goysyada wareegga ee Waveguide waxay u oggolaadaan gudbinta microwave -ka min madal taagan ilaa 360˚ wareegga hirarka afargeeslaha ah, inta jeer ee ugu sarreysa ilaa 94Ghz. Waxay xamili karaan awood ka weyn waxayna leeyihiin hoos -u -dhac yar marka loo eego kala -goysyada wareegga koaxial, gaar ahaan ka dib markay dhaafeen soo noqnoqosho gaar ah, labada faaiido ee kala -goysyada wareegga hirarka ayaa aad u muuqda. AOOD wuxuu bixiyaa halbeegga hirarka mawjadda iyo isku -darka mowjadaha iyo halbeegyada isku -xidhka. Unugyadan waxaa loo adeegsan karaa siddooyin silsilad koronto si ay u siiyaan hirar -hiigsi, awood wadareed iyo gudbinta xogta si wadajir ah. Codsiyada caadiga ah waxaa ka mid ah raadaarka, dayax -gacmeedka iyo nidaamyada anteenada gacanta iwm.
Qaabka Tirada Kanaalka Heerka Joogtada ah Awoodda ugu sarreysa OD x L (mm)
Hore: Isku -dhafka Rotary Fiber -ka ugu tayada wanaagsan - Wareegyada Slip -Capsule - AOOD
Xiga: Aerospace Military Slip Sings
Wadajirka Rotary Coax
Isgoysyada Rotary Media
Rf Wadajir Rotary